ဗစ်တိုးရီးယားအမှု မိသားစုဘက်က မေးခွန်းတွေက ဘာလဲ DNA တကယ်ပျက်ခဲ့တာလား ..? - Update New
July 24, 2019 Naing ပြည်တွင်းသတင်း 0
အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ရုပ်သံကတော့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ခံခဲ့ရတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ အမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမီးလေးဘက်က ဒိုင်ခံရေးသားပေးနေသူ သက္ကမိုးညို(fb acc name) – ဒေါက်တာဝင်းကိုကိုသိန်း နဲ့ BBC တို့အင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်သံပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကလေးအမှုဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထိ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီး သမ္မတကိုယ်တိုင် မှန်မှန်ကန်ကန် စစ်ဆေးဖို့ ပြောဆိုထားတဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်
အဓိကဟိုက်လိုက်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ “DNA တကယ်ပျက်ခဲ့တာလား၊ ပျက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ DNA နဲ့ စစ်ဖို့ရာအတွက် နောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်လောက်များ တိုက်စစ်ဆေးခဲ့သလဲ၊ ဘယ်က DNA ကို စစ်တာလဲ၊” ဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သမီးလေးရဲ့ အမှုအတွက် အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သမီးလေးအတွက် အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့ တောင်းဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကျူးလွန်နေခဲ့တာကြောင့် သမီးမွေးထားတဲ့မိဘတွေအတွက်တော့ ရင်လေးစရာပါ ။သမီးငယ်လေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအတွက် အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံကို ဆက်လက်နားထောင်နိုင်ပါတယ် ။
Video Source : BBC Burmese
ဗဈတိုးရီးယားအမှု မိသားစုဘကျက မေးခှနျးတှကေ ဘာလဲ DNA တကယျပကျြခဲ့တာလား ..?
အခုတဈခါတငျဆကျပေးမယျ့ ရုပျသံကတော့ သကျငယျမုဒိနျးမှုကြူးလှနျခံခဲ့ရတဲ့ ဗဈတိုးရီးယားရဲ့ အမှုကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး သမီးလေးဘကျက ဒိုငျခံရေးသားပေးနသေူ သက်ကမိုးညို(fb acc name) – ဒေါကျတာဝငျးကိုကိုသိနျး နဲ့ BBC တို့အငျတာဗြူးလုပျထားတဲ့ ရုပျသံပဲဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါကလေးအမှုဟာ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာထိ စိတျဝငျစားခဲ့ကွပွီး သမ်မတကိုယျတိုငျ မှနျမှနျကနျကနျ စဈဆေးဖို့ ပွောဆိုထားတဲ့အမှုလညျးဖွဈပါတယျ
အဓိကဟိုကျလိုကျပွောခငျြတဲ့အကွောငျးတှကေတော့ “DNA တကယျပကျြခဲ့တာလား၊ ပကျြသှားပါတယျဆိုတဲ့ DNA နဲ့ စဈဖို့ရာအတှကျ နောကျထပျဘယျနှယောကျလောကျမြား တိုကျစဈဆေးခဲ့သလဲ၊ ဘယျက DNA ကို စဈတာလဲ၊” ဆိုတာတှပေဲဖွဈပါတယျ။
သမီးလေးရဲ့ အမှုအတှကျ အမွို့မွို့အနယျနယျမှာ ဆန်ဒပွပှဲတှေ ပွုလုပျခဲ့ပွီး သမီးလေးအတှကျ အမှနျတရားပျေါပေါကျဖို့ တောငျးဆိုနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ သကျငယျမုဒိနျးမှုတှေ ဆကျတိုကျဆိုသလို ကြူးလှနျနခေဲ့တာကွောငျ့ သမီးမှေးထားတဲ့မိဘတှအေတှကျတော့ ရငျလေးစရာပါ ။သမီးငယျလေး ဗဈတိုးရီးယားအမှုအတှကျ အငျတာဗြူးအပွညျ့အစုံကို ဆကျလကျနားထောငျနိုငျပါတယျ ။
ယနေ့ တရားရုံးမှာ victoria လေးရဲ့ ဖြေကြားချက်များ